ओली पक्षमा लागेको भनिएका योगेशलगायतका नेता माधव पक्षमै फर्किए - Himali Patrika
ओली पक्षमा लागेको भनिएका योगेशलगायतका नेता माधव पक्षमै फर्किए
हिमाली पत्रिका ९ जेष्ठ २०७८, 5:00 pm
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षमा लागेको भनिएका योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू फेरि माधव नेपाल पक्षमै फर्किएका छन् । भट्टराईलगायत घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू फेरि नेपाल पक्षमै फर्किएका हुन् ।
माधव पक्षका सांसदले जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरे पनि भट्टराई, भुषाल, पाण्डेलगायतका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । त्यसपछि उनीहरूलाई ओली पक्षमा लागेको आंकलन गरिएको थियो ।
तर, देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको राति नै ओलीले फेरि संसद विघटन गरेकोले उनीहरूले ओलीलाई साथ दिन नसक्ने र नेपाल पक्षमै लाग्ने जानकारी गराइसकेका छन् । उनीहरू यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । फेरि नेपाल पक्षमा लागेर उनीहरू संसद् विघटनविरुद्ध लाग्ने भएका छन् ।
उनीहरू अहिले संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ताका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने स्थानमा पुगिसकेका छन् । यसअघि आइतबार बिहान भट्टराईले कार्बाही, प्रतिशोध र बदलाको राजनीतिले कसैलाई सहि गन्तव्यमा नपुर्याउने भन्दै संवाद गर्न आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस प्रचण्डपथमा हिँडेको देख्दा ताजुव लाग्यो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रेस चौतारी नेपालको आयोजनामा बालुवाटारमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरुले पनि प्रचण्डपथमा हिडेको देख्दा आफूलाई ताजुव लागेको उनले टिप्पणी गरे । ‘केपी ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने कुरा सुनिरहेको छुँ, कसले गराएको निर्वाचनमा भाग लिने हो ? यो कुन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काँग्रेस उत्तेजना र आवेशमा प्रचण्डपथमा लागिरहेको छ ।’
एमालेका केही नेतालाई उकासेर सरकार बनाउने सपना काँग्रेसले देखिरहेको र यो दलीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने अभ्यास नभएको उनले बताए । लोकतन्त्रमा क्षणिक स्वार्थमा लाग्न कोही नहुने उनले बताए । दलीय अनुशासन, पद्धतिलाई भुलेर कोही अगाडि बढ्न नहुने उनले बताए ।
अरु पार्टीको अनुशासन तोडाएर, अनुचित हथ्कण्डा अपनाएर अगाडि बढ्दा हामी कहाँ पुग्छौं ? काँग्रेसतिर संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तोबेलामा नेपालका बुद्धिजिवीसमेत चुइँक्क बोल्न नसकेको देख्दा चिन्ता लागेको बताए ।